Waraabbiiwwan iskiriinii sobaa miidivaalee hawaasaarratti goodaman fi facaatii odeeffannoo – ኢትዮጵያ ቼክ
Waraabbiiwwan iskiriinii sobaa miidivaalee hawaasaarratti goodaman fi facaatii odeeffannoo
Fayyadamtootni miidiyaalee hawaasaa tokko tokko odeeffannoowwan namoota dhuunfaa fi dhaabbileen maxxanfaman kallattiin qooduurra waraabbii iskiriinii (screenshot) fudhachuun qooduu filatu.
Kanaaf immoo sababootni garaagaraa jiraachuu malu. Fakkeenyaaf odeeffannoo akkaawuntii Tiwiitaraa irratti maxxanfame tokko Feesbuukii irratti qooduuf waraabbii iskiriinii fayyadamuun filatamaa ta’uu danda’a.
Haa ta’u malee waraabbiiwwan iskiriinii (screenshots) miidiyaalee hawaasaarratti qoodaman hundi dhugaa ykn sirrii ta’uu dhiisuu malu.
Waraabbiiwwan iskiriinii tokko tokko ta’e jedhamee namoota odeeffannoowwan sobaa tamsaasaniin kan qoodaman ta’uu malu
Mosaajiiwwan waraabbiiwwan iskiriinii sobaa hojjechuuf gargaaranis heddudha.
Biyya keenya keessatti waraabbiiwwan iskiriinii sobaa fayyadamuun odeeffannoowwan sobaa tamsaasuun keessattuu yeroo dhiyootii as baay’achaa akka jiru hubachuun danda’ama.
Itoophiyaa Cheekis waraabbiiwwan iskiriinii sobaa odeeffannoowwan sobaa ofkeessaa qaban saaxilaa tureera.
Kanaafis odeeffannoowwan waraabbii iskiriinii fayyadamuun (‘screenshot’ godhamuun) qoodaman yemmuu nu quunnaman tasgabboofnee yaaduu, xiinxaluu fi dhugummaa isaanii mirkaneeffachuu qabna.
Maloota dhugummaa waraabbiiwwan iskiriinii ittiin mirkaneeffannu keessaa inni tokko gara fuula/akkaawuntii odeeffannichi irratti maxxanfameera jedhame deemun odeeffannichi dhuguma achi jiraachusaa mirkaneeffachuudha.
Fakkeenyaaf waraabbiin iskiriinii tokko akkaawuntii Obbo “A” irraa fudhatame yoo jedhame akkaawuntii Obbo “A” keessa seenuun odeeffannichi jiraachuusaa ilaaluun barbaachisaadha.
Odeeffannoon waraabbii iskiriinichaarra jiru akkaawuntii/fuula miidiyaa hawaasaa Obbo “A” keessa jira taanaan waraabbiin iskiriinichaa sirriidha jechuudha.
Haa ta’u malee odeeffannoon waraabbii iskiriinirra jiru akkaawuntii/fuula jedhamerra hinjiru taanaan waraabbiin iskiriinichaa soba ta’uu waan danda’uuf qorannoo dabalataa gochuun barbaachisa.
Dabalataan maqaafii suurri pirofaayilii waraabbii iskiriinichaarra jiru, guyyaa fi sa’aatiin akkasumas itti fayyadamni afaanii waa’ee dhugummaa waraabbii iskiriinichaa odeeffannoo nuf kennuu waan danda’uuf xiyyeeffannoon ilaaluun barbaachisaadha.
Waraabbiiwwan iskiriinii miidiyaalee hawaasaarratti agarru amanuufii qooduu keenyaan dura sirrii ta’uu isaanii yaa mirkaneeffannu kan jedhu ergaa keenya har’aati.
መሰረቶም ኣብ ኢንተርኔት ዝገበሩ ናይ ምትላል ተግባራት!
አጠራጣሪ ማስፈንጠሪያዎችን ለመለየት የሚረዱ መተግበሪያዎች
ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝዝርጋሕ ዘረባ ጽልኢት ዘስዕቦ ጉድኣት ንምንካይ ብውልቅና እንታይ ክንገብር ንኽእል?
በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጩ የጥላቻ ንግግሮች የሚያድርሱትን ጉዳት ለመቀነስ በግለሰብ ደረጃ ምን ማድረግ እንችላለን?